दुःखद खबर: दक्षिण कोरियामा एक नेपालीको मृ:त्यु……..! RIP – Khabar PatrikaNp
August 24, 2020 160
कोरियाको देजङ स्थित चुङनाम नेस्नल युनिभर्सिटीमा नेपाली नाम गरेका एक व्यक्तिको श’व वेवारिसे बनेको छ । जस बहादुर पुन नाम भएका उक्त व्यक्तिको परिवार र स्थाई ठेगाना पहि’चान हुन नसक्दा श’व वेवारिसे बनेको हो ।
क्यान्सर पिडित रहेका पुनको गत अगष्ट १५ मा मृ’त्यु भएपनि हाल सम्म ठेगाना पहिचान हुन नसक्दा श’व अस्पतालमै वेवारिसे बनेको छ ।
श’व पुनकै निवासमा फेला परेपनि राहदा’नी लगायत कुनैपनि कागजात प्राप्त नहुँदा उनी नेपाली नै भएको वा नेपाली मुलका अन्य देशका नागरिक भएको भन्ने वि’षयमा यकिन हुन नसके’को कोरियन प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै नेपाली दूतावास सिओ’लले जनाएको छ ।
प्रहरीले मृ’तकको औँठा छापका आधारमा उनी जसब’हादुर पुन नाम गरेका नेपाली भएको बताउँदै सम्बन्धित अध्याग’मनसँग समन्वय गरेर श’वको व्यवस्थापन गर्न नेपाली दूतावा’ससँग आग्रह गरेको छ ।
तर अध्या’गमन विभागले भने दूतावा’ससँग समन्वय गर्न आनाकानी गर्दा पहिचान गर्न ढिलाई भएको नेपाली दूतावास सिओ’लका उपनियोग प्रमुख रामसिंह थापाले बताए ।
थापाले भने, ‘हामीले देजङ स्थित अध्यागमन विभागलाई मृ’तकका विषयमा विवरण उपलब्ध गरा’उन अनुरोध गर्दै पत्रा’चार गरेपनि अध्यागमनले प्रहरीसँग नै समन्वय गर्न भन्यो । अब भोलि सम्ममा फेरी प्रहरीसँग बुझ्छौँ त्यस’पछि थाहा होला । ’
दूतावासले श’वको पहिचा’नमा सहयोग गर्न गैर आवा’सीय नेपाली संघ दक्षिण कोरि’यासँग आग्रह गरेको र संघले पनि प्रयास गरिरहेको बताएको थापाले बताए । यो समाचार खबर पेपर’मा प्रकाशित छ।
एन आर एन कोरियाले गर्यो मृतकको परिवार पहिचानको लागि सहयोगको आग्रह हेर्नुहोस् जस्ताको तस्तै
‘(सम्बन्धित घर -परिवारको स्वीकृति बिना फोटो सार्बजनिक गर्नु परेकोमा NRNA कोरिया दुख ब्यक्त गर्दै माफी माग्दछ। )
कोरियाको थेजन स्थित चुङ’नाम नेस्नल युनिभर्सिटी हास्पि’टलमा उपचार गर्ने क्रम मा मृ त्यु हुनुभएका तथा अस्पतालको रेकर्डमा “जस बहादुर पुन ” नाम रहेका ब्यक्ति ( राहदानी लगायत कुनैपनि कागजात प्राप्त नहुँदा उनी नेपाली नै भएको वा नेपाली मुल’का अन्य देशका नागरिक भएको भन्ने विषयमा यकिन हुन नसकेको) को नेपाल स्थित घर ठेगाना र आफन्तहरु तथा परि’वार सँग सम्पर्क हुन नसके’को कारण निजको श’व अस्पतालमै वेवारिसे भएको हुदा निजको सनाखत गर्ने उदेश्यका साथ नेपाली राजदुतवास सौलका श्रम काउ’नसीलरज्युको अनुरोधमा यो सूचना सार्बजनिक गरिएको हो ।
तस्बिरमा रहेको ब्यक्ति’का सम्बन्धमा कुनै जान’कारी हुनुभएका व्यक्तिले NRNA कोरिया वा नेपाली राजदुतवास सौलमा सम्पर्क गरि सहयोग गरिदिनु हुन यसै सुचनाका साथ गैर आवा’सीय नेपाली संघ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद दक्षिण कोरिया ( NRNA कोरिया) हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।’
यो पनि… दक्षिण कोरियामा विदेशी कोभिड सङ्क्रमितले उपचार खर्च आफै व्यहोर्नुपर्ने !
विदेशबाट दक्षिण कोरिया भित्रिए’का कोभिड–१९ सङ्क्रमित तथा स्वदेशमा नै रहेका तर नियन्त्रणका उपायलाई उल्लङ्घन गर्ने वि’रामीले उपचार खर्च आफै व्यहोर्नुपर्ने भएको छ ।
कोरिया सरकारले आउदो सोमबार’बाट लागु हुने गरी यो व्यवस्था गरेको हो । स्वास्थ्य अधिकारी’हरूका अनुसार कोरियाले विदेशबाट आएका कोभिड–१९ सङ्क्रमित बिरामीहरूलाई उनीहरू’को मेडिकल सेवाको लागत भुक्तान गर्न अनुरोध गर्नेछ ।
यही अगष्ट २४ देखि देशले कूटनीतिक सम्बन्धमा पारस्प’रिक सम्बन्धको सिद्धान्तलाई ध्यान’मा राखेर विदेशीहरूलाई फरक रकम लगाउने दक्षिण कोरियाली अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
अहिलेसम्म दक्षिण कोरि’याले स्वदेशी तथा विदे’शी सबै कोभिड–१९ विरामीहरुलाई निःशुल्क चिकित्सा सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको थियो ।
महामारी लामो समयसम्म अन्त्य नहुँदा करदाताह’रुलाई थप भार पर्र्ने भन्दै सरकारले विदे’शी बिरामीहरुलाई बोझ बाँड्न आह्वान गरेको हो । दक्षिण कोरिया यसको निःशुल्क शुल्क’को उपचार नीति परिवर्तन गर्दा आउने कूटनीतिक समस्याबारे सचेत रहेको छ ।
यद्यपि समुदायमा सङ्क्र’मण नियन्त्रणका लागि अझै पनि भाइरस सङ्क्रमित विदेशीलाई आवश्यकता अनुसार केही वा सबै ख’र्चमा छुट दिने सरकारी अधिकारी’हरूले बताएका छन् ।
दक्षिण कोरियामा विग’त पाँच महिना यता बुधबार सङ्क्रमितको सङ्ख्या सबैभन्दा धेरै पुगेको छ ।बुधबार सङ्क्रमि’तको सङ्ख्या २९७ पुगेको छ।
दक्षिण कोरियाको राष्ट्रिय रोग नियन्त्रण तथा रोक’थाम केन्द्रका अनुसार अहिलेसम्म यहाँ कूल सङ्क्रमि’तको सङ्ख्या १६ हजार ५८ पुगेको छ भने ३०६ सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ ।
Prevफेसबुकमा लभ परेर हो’टेलमा भेट्न जाँदा ससुरा- बुहारी परेपछि…… हेर्नुहोस्
Nextश्रीमतिलाई २५ लाख ऋ,णमा डु,बाएर श्रीमान अर्की के,टी सँग बिदेश मै बसेपछि बिचरा यता श्रीमतिको रूवा,बासी……..!
कोरोना संक्रमण ब’ढेको ब’ढ्यै, अस्पतालमा बेड भरियो !
पाथिभरा माताले हामी सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन,भोलि मंसिर १० गते बुधबार ,यस्तो छ तपाईको राशिफल !
प्रेमप्रसाद सञ्जेल शनिबार कार्यालय महिला कर्मचारीबाट कुटिए